Orexin1 အဲဒီ receptor အချက်ပြမှုသည် cocaine နှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည် (2015) - Your Brain On Porn
Orexin1 အဲဒီ receptor အချက်ပြကိုကင်းဆက်နွယ်တွေကို (2015) အတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးပွါး
EUR J ကို neuroscience ။ 2015 မေလ; 41 (9): 1149-56 ။ Doi: 10.1111 / ejn.12866 ။ EPub 2015 မတ်လ6။
Bentzley BS1, Aston-ဂျုံးစ်, G.
အဆိုပါ orexin / hypocretin system ကိုငွိမျးကင်းရှာနှင့်အခြေအနေများကိုရာအရပျ preference ကို၏ထုတ်ဖော်ပြောဆို cue-သွေးဆောင် reinstatement အပါအဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို, ပါဝင်ကြောင်းမျိုးစုံကိုကင်းစွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ သို့သော် orexin စနစ်ကထိုကဲ့သို့သောငွိမျးကင်းရှာခြင်းနှင့်နိမ့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်း-ရစေတယ် reinstatement အဖြစ်လျော့နည်း cue-မှီခိုဖြစ်ကြောင်းတော်တော်များများအပြုအမူတွေအတွက်တစ်ကဏ္ဍမှပါပါဘူး.
ကျနော်တို့ကိုကင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များသည်ကိုကင်းတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲ orexin-1 receptors (OX1Rs) တွင်အချက်ပြခြင်းနှင့်ထိတွေ့မှုရှိသည်၊ ဤ cue-စေ့စပ်ထားသော OX1R အချက်ပြမှုသည်ကိုကင်းအားစိတ်အားထက်သန်စေသည်။ ကိုကင်းကိုလှုံ့ဆော်မှုသည် Sprague-Dawley ကြွက်များတွင် OX1R ၏ရန်လိုသော SB-334867 (SB) နှင့်ကြိုတင်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်အပြုအမူ - စီးပွားရေးဝယ်လိုအားကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့်တိုင်းတာသည်။
ကိုကင်း-ဆက်စပ်တွေကိုပစ္စုပ္ပန် ရှိ. , SB မှသာထိုအတွေကိုရှေ့မှောက်၌ကင်းဝယ်လိုအားကိုလျှော့ချသည့်အခါကင်းဝယ်လိုအားမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်နှစ်ဦးစလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ orexin-မှီခိုထုံးစံ၌ကင်း-ဆက်စပ်တွေကိုမောင်းနှင်နေကြသည်အဖြစ်ကိုကင်းဝယ်လိုအား, ကိုကင်းရှာ၏ cued reinstatement ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ SB cue-သွေးဆောင် reinstatement အပြုအမူပိတ်ဆို့နှင့်အခြေခံဝယ်လိုအားမြင့်ဝယ်လိုအားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အကြီးဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအကြီးမြတ်ဆုံး cue-မှီခိုအပြုအမူနှင့်အတူဆိုလိုသည်မှာတိရိစ္ဆာန်များ SB ထိရောက်မှုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ OX1R အချက်ပြကိုကင်း-ဆက်စပ်တွေကိုများ၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုတိုးပွါးသော်လည်းမကြောင်းကင်း၏တစ်ဦးတည်းကောက်ချက်ချ. ဤသည် orexin စိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်မှုကိုသက်ဝင်စေဖို့ Conditions တွေကိုနိုင်စွမ်းအတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ထောက်ခံပါတယ်။
အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒ; ဝယ်လိုအားမျဉ်းကွေး; elasticity; ကြွက်; relapse; Self-အုပ်ချုပ်ရေး